MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA MADOW EE RUUSHKA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Madow ee Ruushka
'Kani waa Iskra Fantasy S Bosfora Vostochnogo CGC TDI TT ('Tasha'). Iyadu waa afar jir Territori Madow ah. Waxaa iska leh Andrea iyo Steven Barber in kasta oo ay ku dhalatay magaalada Vladivostok ee dalka Ruushka, haddana waxay ku nooshahay beer ku taal dhinaca kale ee adduunka ee Galbeedka New York (Sand Meadow Farm). Tasha waa xubin qaali ku ah qoyska waxayna ku raaxeeysataa jimicsi badan beerta. Waxay si gaar ah u jeceshahay barafka! Iyadu sidoo kale waa eey daaweyn sharciyeysan oo si joogto ah u booqata guryaha xanaanada. ' Lahaanshaha sawirka Andrea Barber Photography
Liiska eeyaha Madoow ee Ruushka Terrier Mix
Terrier-ka Madoow ee Ruushka
Ruushka Bear Schnauzer
blak ruhsh-uh n ter-ee-er
Madawlayaasha Ruushka ee Madoow ayaa ka weyn cabbirka dhex-dhexaadka ah. Noocan dhifka ah ee Ruushku waa mid adag oo xoogan oo leh habdhis wanaagsan. Waa mid weyn, awood leh, deggan oo feejigan. Madaxa qaab-dhismeedka baloog waa in si xoog leh loogu dhisaa qalfoof ballaaran iyo madax dheer. Shaarubaha iyo gadhku waxay ku daraan isugeynta muuska. Joogsiga waa inuu noqdaa mid si wanaagsan loo qeexay laakiin aan lagu dhawaaqin. Sanka ayaa weyn, midabkiisuna dhan yahay midabkiisuna madow yahay. Dibnaha ayaa buuxa, wareegsan oo madow xaga geesaha iyo daamankuna waa weyn yihiin oo xoog badan yihiin. Afku waa inuu ahaado mid hilib leh hadaanay ahaynna, waa naseexad weyn oo ku jirta giraanta showga. Ilkaha waa inay ku kulmaan qaniinyada maqas. Indhaha mugdiga ahi waa kuwo dhexdhexaad ah oo gooni loo dhigay. Wareegyada waa inay ahaadaan kuwo madow iyo ubax eg. Dheguhu waa qaab saddex-xagal leh oo qaloocsan oo qalloocsan. Dhegaha la jaray lama aqbali karo. Dhererka dhegtu waa inuu gaaraa geeska banaanka ee baalasha indhaha. Dhegaha ayaa la dhigay halkii sare. Qoorta waa inay ahaato mid qaro weyn, muruq iyo xoog leh. Dhererka jidhku waa inuu ahaadaa mid toos ula jaan qaada dhererka meesha ku engegaya, isaga oo siinaya muuqaal laba jibbaaran. Qalalku wuxuu ka kici doonaa safka dambe oo kooxdu waxay si fudud ugu soo dhaceysaa dabada sare. Markuu dabada soo xirto, waxaa haray 3 ilaa 5 vertebrae. Dabo aan la furin maahan inay AKC ciqaabto. Fiiro gaar ah: dabo istaaggu waa sharci darro inta badan Yurub. Ma jiri karo qoyaan ama dheel dheel xad dhaaf ah. Cagaha aadka u weyn, cagaha u eg orso waxay leeyihiin suuf adag, madow, cufan cidiyuhuna waa waaweyn yihiin oo midab madow yihiin. Jidhku si wanaagsan ayaa loogu dheelitiray iyada oo geedka shaxdiisa uu yaalo leydi dhexdeeda. Dhererka jirku waa inuu ahaadaa mid si toos ah ugu jira joogga meesha engegga ah. Topline waa inuu ahaadaa mid siman laakiin aan u muuqan mid toosan ama toosan. Lugaha hore waa in toos loo hagaajiyaa oo lafa-qaboojiyaa. Garbaha waa inuu ahaado mid ballaaran, muruq iyo si wanaagsan loo soo saaray oo leh garbaha ballaaran oo foorara. Suxulladu waa inaysan noqon gudaha iyo dibedda. Lugaha waa in lagu daboolaa 2 ilaa 4 inji oo timo jilicsan. Cagaha ayaa aad u ballaaran oo si buuxda loogu daboolay timo. Xaga dambe waa mid si fiican loofilan oo muruqyo leh cilad heer sare ah. Hocks waa weyn yihiin oo loo horumariyey guga iyo wadista. Lugaha iyo cagaha sifiican ayaa loo daboolay. Muuqaalka ayaa buuxa. Lugaha waa inay isku mid noqdaan. Terrier-ka Madow ee Ruushka wuxuu leeyahay socod xoog leh, awood leh oo si wanaagsan isku dubaridan. Waxay u muuqdaan inay yihiin khafiif cagahooda. Dabada ayaa la jaray oo kor loo taagay. Koodhka biyuhu waa inuu noqdaa madow. Calaamadaha cad ama bunni ayaa u qalma. Muuqaalka timo shaqsiyadeed oo cawl ah ayaa ku dhex jira jaakadda. Koodhku wuxuu u muuqan karaa mid buuxa ama gacanta laga siibay. Maqaarka jaakaddu waa inuu ahaadaa mid xoogaa jilicsan - xaddiga waxay kuxirantahay inuu buuxsan yahay ama gacanta laga siibay Gadhka iyo muuska marna waa inaan la taaban.
Madawlayaasha Ruushka ee Madowga ahi waa geesiyiin aadna u fiirsada. Ka shakisan shisheeyaha, waxay leeyihiin dareen xoog leh oo ilaalin ah oo u muuqan doona da'da hal sano iyo badh ilaa laba sano. Eyyada koraya waa in loola dhaqmaa si kalgacal leh laakiin si adag, si loogu jiheeyo jihada saxda ah. Eygu waa xasaasi, ciyaar, la qabsi iyo deg deg wax ku barta. Iyagu waa kuwa wax baadha oo wax walba geli doona. Xitaa iyagoo qaangaar ah way ku faraxsan yihiin carruurta waxayna jecel yihiin inay la ciyaaraan. Noocani wuxuu raadiyaa xiriir adag oo lala yeesho dadka iyo xayawaanka. BRTs waxay leeyihiin dabeecad adag oo dheellitiran. Waxay ka fogaadaan inay la dagaallamaan eeyaha kale, in kasta oo ragga aysan la noolaan karin eeyaha waaweyn ee waaweyn haddii milkiilayaashu aysan 100% alfa ka sarreyn labadoodaba. Noocani wuxuu si fudud ula noolaan karaa non-xukuma ama eeyaha yaryar , bisadaha , fardo , bakaylaha iwm Way fududahay in jabka guriga waana inuu si fudud u aqbalaa xadhigga. BRTs way ku raaxaystaan fadhiyada tababarka oo jecel inay ka farxiyaan sayidkooda. Noocani wuxuu ciyi karaa oo keliya markay dareemaan inay lagama maarmaan tahay. Degdeg wax u qabad, marwalba diyaar bay u yihiin ilaali milkiilahooda iyo gurigooda . Black Terriers-ka 'Bloomers soo daahay' waxayna qaadataa waqti dheer si ay si buuxda ugu bislaadaan. Haddii eeyga la siiyo hoggaan adag sida eey oo kale milkiilayaashuna ay si joogto ah ugu sii socdaan qaangaarnimada, xukunku wax dhibaato ah ma leh. Waa inaad sariirta, sariirta iyo miiska aad la wadaagtaa eeygaaga oo keliya haddii aad diyaar u tahay inaad sidaas sameyso hal sano ka dib sidoo kale. Si kasta oo ay u macaan iyo soo jiidasho leh eeydu u leedahay, xusuusnow in sannad gudihiis kani noqon doono eey xoog iyo xoog leh. Madawlayaasha Ruushka ee Madowga ahi way fududahay in guriga lagu haysto daryeel yar. Maaha inay ku noolaadaan aqal bannaanka ka baxsan maxaa yeelay eeyaha noocaas ah waxay helayaan feejignaan iyo dhiirrigelin yar. Jimicsi maskaxeed iyo jireed maalin kasta waa muhiim si loo sii daayo tamarta eeygan. Haddii aad u oggolaato tamarta inay ka dhex dhisnaato waad ku dhici doontaa arrimaha dhaqanka . Eeygu waa inuusan waligiis ku hor socon bini aadamka isagoo hogaaminaya, laakiin waa inuu agtiisa ama gadaasha ka yahay si uu u xoojiyo eyga meel ka mid ah aadanaha . Maskaxda eyga, hogaamiyaha xirmada had iyo jeer waa la hor mariyaa. Hoggaan joogto ah iyo xiriir dhow oo lala yeesho qoyska ayaa soo saarta tayada ugu wanaagsan ee tarankaan. Haddii eey caynkan oo kale ah lagu dhejiyo banaanka, kana fogaado qoyskiisa oo aan lahayn hogaan, ma baran doono sida ugu haboon ee loo ilaaliyo waxyaalaha waxaana laga yaabaa in maalin uun laga ilaaliyo qaankiisa milkiilihiisa!
Dhererka: Ragga 25 - 29 inji (64 - 74 cm) Dumarka 25 - 28 inji (64 - 72 cm)
Iyada oo loo dulqaadanaayo 1.3 inji (3 cm) ka badan haddii eeygu si fiican isu dheellitiran yahay.
Miisaanka: 80 - 143 rodol (36 - 65 kg)
Eeyaha labka ah ayaa ka weyn kana weyn dumarka.
Ku soo dhowaanshaha sinta iyo xusulka dysplasia. X-raynta eeyaha maahan wax caan ku ah soosaarayaasha Ruushka, sidaa darteed waxay ku xiran tahay kuwa soo koraya ee ka baxsan Ruushka inay ka adkaadaan dhibaatadan xulashada bartilmaameedka ah. Haddii dhagaha aan si fiican loo daryeelin waxay u janjeeraan inay qaadaan otitis.
Terrier-ka Madow ee Ruushka wuxuu ku fiicnaan doonaa aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Iyagu gudaha kama hawl galaan, si kasta oo daaradu u weynaato waxay fadhiyaan albaabkaaga hore iyagoo sugaya inay soo galaan. Waxay jecel yihiin inay aad ugu dhowaadaan milkiilahooda. Waxay kaa raacayaan qol ilaa qol kale. Gudaha beerta waxay ku raaci doonaan daaqad ilaa daaqad waxayna kugu sugayaan albaabka. Waxay ubaahan yihiin xiriir aadamiya oo aad isugu dhaw. Noocani sifiican ugama noolaanayo aqal waa inay lahaadaan xiriir dhow oo bini aadam si ay ugu farxaan.
Madawlayaasha Madoow ee Ruushka marwalba waxay diyaar u yihiin a socod dheer maalin kasta . Waxay jecel yihiin in ay ciyaaraan, ciyaaraan oo la madadaaliyo. Intooda badani waxay jecel yihiin barafka iyo biyaha. Waxay ku soo rogi doonaan barafka oo waxay ku firidhsan doonaan biyaha.
Qiyaastii 10-14 sano
6 - 12 eeyo
Koodhka cimilada aan fiicnayn wuxuu ka kooban yahay timo adag, jiilaal, dhagan, jiif dhow, timo ruxruxo oo dhererkoodu yahay 1.5 '- 4' (4 -10 cm). BURTTA cayaaraha sunnayaasha iyo gadhka. Qaybta sare ee qoorta iyo qallajinta ayaa soo jeedinaysa gogol. Koodhka hoose waa mid adag oo si fiican u horumarsan. Goynta joogtada ah 2-3 jeer sanadkii ayaa loo baahan yahay. Dharbaaxidda waxaa loo baahan yahay oo keliya haddii jaakaddu jilicsan tahay. Caday BRT ugu yaraan hal mar usbuucii. Waa muhiim in timaha laga soo saaro dhuumaha dhegaha lagana jaro timaha timaha hoostooda. BRT waxay daadisaa wax aad u yar haddii si joogto ah loo cadaadiyo.
Afartameeyadii, xeradii ciidanku xukumayey 'Red Star' waxay bilaabeen inay ey u soo baxaan baahidooda gaarka ah. Waxay isticmaaleen barnaamij ay soo saareen Soviet-breeder-takhasusleyaal waxayna abuureen nooc cusub gaar ahaan ku habboon shaqooyinkooda gaarka ah. Hadafku wuxuu ahaa eey aad u ballaadhan, adag, xamaasad sare leh, oo had iyo jeer diyaar u ah inuu shaqeeyo oo awood u leh inuu hor istaago kala duwanaanshaha weyn, cimilada dalka. Bixiyeyaashu waxay ahaayeen Giant Schnauzers, Rottweilers iyo Airedale, iyo Ruushka Water Dog. Noocyo badan ayaa lagu soo daray dhammaan ku dhowaad labaatan nirigood oo ku lug lahaa abuurista Territoriga Madow ee Ruushka. Kaliya eeyaha ugu fiican ayaa la soo saaray. Wax yar ka dib waxay yeesheen eey deggan oo dabeecad iyo dabeecad leh, laakiin aan ahayn nooca. Waqtigaas, dabeecad iyo dabeecad keliya ayaa la tiriyey. Dhowr sano kadib, Ruushka 'DOSAAF' Kalkaaliyeyaasha (DOSAAF waa hay'ad gargaar) waxay ka soo iibsadeen eeyaha Red Star kennel. Waxay bilaabeen inay jaangooyaan muuqaalka muuqaalka iyagoo aan dayacin tayada wanaagsan. Bishii Meey 1984 ayaa FCI u aqoonsatay jaangooyada # 327 'Black Russian Terrier.' Terrier-ka Madow ee Ruushka wuxuu u yahay Ciidanka Cas waxa Malinois u yahay Ciidanka Faransiiska. Terrier-ka Madow ee Ruushka wuxuu leeyahay dhammaan awooda Ey adhijirka Jarmalka ee aan lahayn gardarrada aan loo baahnayn. 1-dii Julaay, 2004, Madaweynihii Madow ee Ruushka waxaa loo oggolaaday inuu xubin buuxda ka noqdo Kooxda Shaqada ee AKC.
Terrier, AKC Shaqaynta
BRAGG = Madow Ruushka (Terrier) Isbahaysiga-Albaabka Dahabka ah
BRTCA = Madowga Madoow ee Ruushka ee Naadiga Mareykanka
FCI waxay ugu yeertaa nooca Ruushka Madow ee Ruushka.
Iskra Fantasy S Bosfora Vostochnogo CGC TDI TT (“Tasha”), ey ey daweyn shahaado haysta, sawir xushmad leh Andrea Barber Photography
Madaw Ereyga madow ee Ruushka
Boris (Bojai Crook) qiyaastii 5 sano jir — halka Boris aan la shahaadeyn wuxuu u shaqeeyaa sidii eey daaweyn waalidkiis milkiilihiisa. Mulkiilihiisa ayaa ka fiirsanaya inuu shahaadada siiyo.
Boris (Bojai Crook) qiyaastii 5 sano jir
Boris (Bojai Crook) oo qiyaastii 1 sano jir ah milkiilahiisa
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah Terrier-kii Madow ee Ruushka
Sawirada Madow Ruushka ee 1
papi tzu eeyo yaryar oo iib ah
feeryahan isku darka wax soo saarka dahabiga ah ee iibka ah
alaskan malaamute qas yey
shiba inu qaso chihuahua dabeecad
injirta injirta ma noqon kartaa madow
4 sano jir retriever